Nkume ndị na-amaghị ama: njirimara, etu esi akpụ ha na nhazi ọkwa | Netwọk Mgbasa Ozi
N'etiti ụdị nkume dị iche iche anyị nwere akwa nkume. Elu ala na ọtụtụ mineral dị n’elu ala nke ụwa anyị a. Agbanyeghị, oke ikuku dị oke mkpa ebe ọ bụ na akwa oyi akwa nke ụwa bụ 95% mejupụtara ha. Fọdụ amaara nke ọma dị ka granite na obsidian, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ okwute ndị na-adọrọ adọrọ nke ị maara.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara niile na mbido oke egwu.
2 Nhazi nke oke nkume
3 Ofdị nkume ndị na-asọ oyi
3.1 Uredị ederede
3.2 Chemical mejupụtara
A na-akpọkwa ha nkume ndị nwere magma, a na-akpụkwa ha mgbe nkume a wụrụ awụ n'ụdị nke magma malitere ịjụ oyi. Ọ bụ mgbe ọnụọgụ abụọ nke magma na-amalite ịjụ oyi na mineral ga-amalite ịmịpụ ma mebie ihe niile ha chọrọ. Magma nwere ike mma n'ụzọ abụọ. N’otu aka, anyị nwere jụrụ oyi n’elu ụwa nke na-apụta n’ihi mmetụta nke mgbawa ugwu. Wayzọ ọzọ iji ajụkwa oyi bụ n'ime lithosphere. Lithosphere bụ akwa siri ike nke elu ụwa. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nkume ndị a na-etolite n'okpuru ụwa ma kpọọ ya nkume nkume. Nkume ndị dị jụụ n’elu ala bụ ndị a maara dị ka nkume mgbawa ugwu ndị na-ada ụda.
Ọ bụ ezie na ụdị nkume ndị a na-etolite nnukwu pasent dị elu na akụkụ elu nke ụwa, a na-ahụkarị ha n'okpuru oyi akwa nke Metamorphic nkume na sedimentary nkume. Ha dị oke mkpa na ngalaba mmụta ala na njirimara ha yana etu esi enyere ha aka ịghọta mkpuchi nke ụwa. Ihe mejupụtara uwe elu ụwa na ihe ndị gara aga na-enyere anyị aka ịghọta nhazi na njirimara nke ụwa anyị.
Nhazi nke oke nkume
Ka anyị hụ ihe nhazi ọkwa ndị dị maka oke egwu. Dị ka anyị hụworo na mbụ, a na-ahazi ha ozugbo site na ntọala ha. Ọ bụrụ na ha ajụwo elu n'akụkụ nke ụwa, a na-akpọ ha nkume ndị na-acha ọkụ ọkụ na-agbanye aka na nke ọzọ, ọ bụrụ na ha ajụwo oyi n'ime lithosphere a maara ha dị ka akwa nkume nke plutonic. A na-akpọkwa Plutonics nkume intrusive ebe ọ bụ na ha guzobere n'ime lithosphere. N'ebe a, magma na-ajụkwu oyi na usoro dị nwayọ nwayọ nke na-eweta nkume nwere kristal buru ibu karị. A pụrụ ịhụ kristal ndị a n'ụzọ dị mfe karị.
A na-ebugharị nkume ndị nwere ume na-ebu elu elu ụwa site na mbuze nke mbibi ma ọ bụ nrụrụ tectonic. Anyi aghaghi ichefu na ihe mejuputara elu uwa bu ihe eji abanye n’ime ya. Mwepụ ahụ bụ ihe mmadụ na-eleghara anya mana anyị na-ekwu maka oge a na-akpọ geological, a na-akpọ frogs pluton ebe ọ bụ na ha bụ nnukwu mbibi magma nke ha si kpụọ. Okwesiri ighota na nkpuru obi ndi ozo di oke elu na-agha obi.
N'aka nke ọzọ, a na-akpụ nkume ndị nwere ike igosiputa ma ọ bụ okwute mgbawa mgbe a na-achụpụma magma n'èzí nke ụwa ọ na-ajụkarị ngwa ngwa. Ihe ka ukwuu na nkume ndị a bụ ihe sitere na mgbawa ugwu na site na ịjụ oyi nke magma na oke ọsọ. Kristal a na-eke n'ime nkume ndị a dị obere ma bụrụ ndị mmadụ na-ahụghị. N'ime ụdị okwute a ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ oghere nke oghere ma ọ bụ oghere nke ikuku gas na-ahapụ na nke ahụ na-etolite na usoro nkwenye.
Ewezuga oke ọkwa abụọ a anyị nwekwara ndị ọzọ. A na-akpọ ha nkume ndị Kalịnda. Nkume ndị a dị n’etiti ibe ha. Mgbe nnukwu magma na-aga n'elu ma na-eme ka ọ sie ike n'ụzọ, ọ na-etolite nkume Phylonian.
Ofdị nkume ndị na-asọ oyi
Anyị ga-ahụ ihe ọkwa ọkwa dị iche iche dị iche iche dịka nhazi ha na ederede ha si dị.
Nkume nzuzu nwere ụdị textures ndị a:
Vitreous: ọ bụ ederede a na-ahụkarị na nkume mgbawa. A na-etolite udidi a site na ịtụba ya n'ime ikuku na ike ikuku jụrụ oyi na-emetụta.
Aphanik: Ha bụ nkume mgbawa nwere microscopic crystal.
Phaneritics: ha na-emeju nnukwu magma nke ejiri nwayọ nwayọ ma dị omimi.
Uhie: Ha bụ nkume nwere kristal buru ibu na etiti na obere ndị dị n'èzí. Nke a bụ n'ihi obi jụrụ oyi. Mpaghara nwere kristal buru ibu ejirila nwayọ nwayọ nwayọ, ebe akụkụ nke nwere kristal pere mpe ma mee ka ọ dị ngwa karịa ngwa ngwa.
Pyroclastic: a na-emepụta pyroclasts na mgbawa-ụdị ugwu mgbawa. Ha anaghị enwe kristal ma ọ bụ mpekere nkume.
Mmekọahụ: Ha bụ ndị nwere ọka siri ike ma mejupụtara kristal nke karịrị otu sentimita na dayameta. A na - akpụ ha mgbe magma nwere nnukwu mmiri na ihe ndị ọzọ na - agbanwe agbanwe.
Ka anyị lee ihe dị iche iche nkume dị egwu dị iche iche dabere na ngwakọta kemịkal nke nke ọ bụla n'ime ha:
Félsicas: Ha bụ nkume ndị ahụ nke mebere silica na agba dị ntakịrị. Anyị na-ahụ na etinyere jikọrọ ọnụ kọntinentị n'ụdị okwute a ma ha nwere mkpokọta 10% dị ọcha.
Andesitic: ha nwere ma ọ dịkarịa ala 25% silicates gbara ọchịchịrị.
Mafic: nke a na ụdị nkume na-abụkarị nnọọ ọgaranya na ọchịchịrị silicates. Ha nwere njupụta dị elu na agba ọchịchịrị ma na-emechikarị oke osimiri.
Ultramafic: ha nwere 90% nke ihe mejuputara ha silicates. Ha na-abụkarị obere nkume ịchọta n'elu ụwa.
N'etiti ihe atụ kachasị amara nke nkume dị egwu anyị nwere granite, nke kachasị nkume plutonic. Mwakpo ahụ bụkwa otu n'ime oke ugwu mgbawa ama ama. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ụdị nkume dị iche iche dị iche iche dabere na nhazi ha.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nkume na-acha ọkụ na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nkume nzuzu